မာရာဒိုနာရဲ့ ဘုရားပေးသောလက်သွင်းဂိုးနဲ့ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၆ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၁၃)
23 Jun 2018 . 6:34 AM
ဒီပြိုင်ပွဲကို အိမ်ရှင်အဖြစ် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံက လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့်ရတဲ့ ပထမဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ ဖောက်ကလန်စစ်ပွဲကြောင့် တင်းမာမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ မဟာပြိုင်ဘက် အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ အာဂျင်တီးနားနဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းတို့ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အာဂျင်တီးနား ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး မာရာဒိုနာ Maradona (၇၅)ကိုက် အကွာကနေ အင်္ဂလန်နောက်ခံလူတွေနဲ့ ဂိုးသမားကိုပါ အလိမ်အခေါက်စွမ်းရည်တွေနဲ့ တောက်လျှောက် ကျော်ဖြတ်သွင်းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးအပြင်၊ “ဘုရားပေးသောလက်” လို့ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ လက်နဲ့ ပုတ်ပြီး သွင်းယူခဲ့တဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်။
နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကို အာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့ အနောက်ဂျာမနီအသင်းတို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး အာဂျင်တီးနားအသင်းက (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူကာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံဆုကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ အနောက်ဂျာမနီအသင်းကတော့ နယ်သာလန်အသင်းအပြီး ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကို ပြိုင်ပွဲ (၂)ကြိမ်ဆက် တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယနေရာနဲ့ ကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့ အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ အာဂျင်တီးနား တိုက်စစ်မှူး မာရာဒိုနာကတော့ ခြေစွမ်းပြသမှုနဲ့အတူ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး နာမည်ကျော် ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁၄)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၁၉၈၆ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ မှတ်တမ်းအကျဉ်း
Dates – 31 May – 29 June (30 days)
Venue(s) – 12 (in9host cities)
Champions – Argentina (2nd title)
Fourth Place – Belgium
Goals Scored – 132 (2.54 per match)
Attendance – 2,394,031 (46,039 per match)
Top Scorer(s) – Gary Lineker (England) –6goals
Best Player – Diego Maradona (Argentina)
Best Young Player – Enzo Scifo (Belgium)
Photo:Pinterest, Thewinin, Twitter
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၁၃)
ဒီပွိုငျပှဲကို အိမျရှငျအဖွဈ မက်ကဆီကိုနိုငျငံက လကျခံကငျြးပခဲ့ပွီး ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို ဒုတိယအကွိမျမွောကျ အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခှငျ့ရတဲ့ ပထမဆုံးနိုငျငံအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ ဖောကျကလနျစဈပှဲကွောငျ့ တငျးမာမှုတှရှေိခဲ့တဲ့ မဟာပွိုငျဘကျ အသငျးတှဖွေဈတဲ့ အာဂငျြတီးနားနဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးတို့ ကှာတားဖိုငျနယျမှာ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး အာဂငျြတီးနား ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး မာရာဒိုနာ Maradona (၇၅)ကိုကျ အကှာကနေ အင်ျဂလနျနောကျခံလူတှနေဲ့ ဂိုးသမားကိုပါ အလိမျအခေါကျစှမျးရညျတှနေဲ့ တောကျလြှောကျ ကြျောဖွတျသှငျးယူခဲ့တဲ့ ဂိုးအပွငျ၊ “ဘုရားပေးသောလကျ” လို့ နာမညျကြျောခဲ့တဲ့ လကျနဲ့ ပုတျပွီး သှငျးယူခဲ့တဲ့ သှငျးဂိုးတှနေဲ့ ကမ်ဘာကြျောခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈတယျ။
နောကျဆုံးဗိုလျလုပှဲကို အာဂငျြတီးနားအသငျးနဲ့ အနောကျဂြာမနီအသငျးတို့ တကျရောကျနိုငျခဲ့ပွီး အာဂငျြတီးနားအသငျးက (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူကာ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ခနျြပီယံဆုကို ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ အနောကျဂြာမနီအသငျးကတော့ နယျသာလနျအသငျးအပွီး ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့ကို ပွိုငျပှဲ (၂)ကွိမျဆကျ တကျရောကျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဒုတိယနရောနဲ့ ကနြေပျခဲ့ရတဲ့ အသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ အာဂငျြတီးနား တိုကျစဈမှူး မာရာဒိုနာကတော့ ခွစှေမျးပွသမှုနဲ့အတူ ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံးကစားသမားဆုကို ရရှိခဲ့ပွီး နာမညျကြျော ကစားသမားတဈဦး ဖွဈလာခဲ့တယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၁၄)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၁၉၈၆ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ မှတျတမျးအကဉျြး